हजुरबुवाको सम्झनामा साढे ५ लाख खर्चिएर ककनी लगलगे मन्दिरमा दिलीप तामाङले बनाए सुन्दर गेट बुधवार, चैत्र १६, २०७८
वर्णालुको गणेशकुण्डमा कोरोना प्रभाव आइतवार, भदौ ६, २०७८
कैलाश टुर्स अपरेटर्सको प्रथम उपाध्यक्षमा लिलाबल्दभ दाहाल विजयी ओखलढुंगा । कैलाश टुर्स अपरेटर्स नेपालको शुक्रबार भएको निर्वाचनमा ओखलढुंगाका लिलाबल्दभ दाहाल प्रथम उपाध्यक्ष पदमा विजयी भएका छन् । सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसका पुर्ब इकाइ सभापति, नेपाल बिद्यार्थी संघका पुर्ब केन्द्रिय सदस्य, नेपाली कांग्रेस ओखलढुंगाका युवा नेता तथा कांग्रेस महाधिवेशन प्रधिनिधि समेत रहेका पर्यटन व्यवसायी दाहाल विजयी भएका हुन् । शुक्रवार, पुष ३, २०७७
पैयुँ फुलेर ढकमक्कै (फोटो फिचर) ओखलढुंगा, २४ मंसिर । नेपालमा पैयुँका रुपमा चिनिने साकुरा फूल देखाएर पर्यटकबाट हरेक वर्ष जापानले अरबौँ कमाउने गर्छ । तर त्यही पैयुँ ओखलढुंगाका गाउँघर र जंगलमा भने त्यसै खेर गइरहेको छ । जिल्लामा घाँस दाउरा र काठका लागि पैयुँ उपयोग हुने गरेको छ । बुधवार, मंसिर २४, २०७७
जाने होइन त देम्बाडाँडा ? (फोटोफिचर) ओखलढुंगा, ३० कात्तिक । तीन हजार तीन सय ५० मिटर अग्लो देम्बाडाँडा ओखलढुंगाकै अग्लो डाँडा हो । यो डाँडा खिजीदेम्बा गाउँपालिका वडा नं. ५ मा पर्छ । यो डाँडाको विशेषता भनेकै विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायतका दर्जनौं हिमशृङ्खलाको दृष्यावलोकन हो । आइतवार, कार्तिक ३०, २०७७
धार्मिक आस्थाको केन्द्र चम्पादेवी मन्दिर ओखलढुंगाकै प्रमुख एवं देशको महत्वपूर्ण धार्मिकस्थल हो चम्पादेवी । यो मन्दिर चम्पादेवी गाउँपालिकाको वडा नं. ९ मा अवस्थित छ । धार्मिक हिसाबले प्रसिद्ध यो मन्दिरको नामबाटै स्थानीय तह चम्पादेवी गाउँपालिकाको नामाकरण भएको हो । शुक्रवार, कार्तिक २८, २०७७
पोकलीको वैँश (फोटोफिचर) केही दिनअघि भ्रमण वर्ष २०२० का लागि सय गन्तव्य सूचिमा सुचिकृत ओखलढुंगाको पोकली झरना पुगेको थिएँ । लेती र वाच्पु गाउँको बीचमा रहेको सुन्दर पोकली झरना अग्लो पहराबाट उर्लिरहेको थियो । भर्खर वर्षा रोकिएर दिन घामले घमाइलो थियो । बुधवार, कार्तिक १९, २०७७
६ सामुदायिक वनमा आकर्षक पार्क ओखलढुंगा । डिभिजन वन कार्यालय ओखलढुंगाले जिल्लाका ६ वटा सामुदायिक वनमा आकर्षक पार्क निमार्ण गरिरहेको छ । कार्यालयले सामुदायिक वनसँगको सहकार्यमा पार्क निमार्ण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । शुक्रवार, असार १२, २०७७
प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : रुम्जाटारमा स्मार्ट सिटीको डीपीआरलाई निरन्तरता दिइने ओखलढुंगा । प्रदेश १ सरकारले आज प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ओखलढुंगाको रुम्जाटारमा स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्यलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ । प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त घोषणा गरेका हुन् । शुक्रवार, जेठ २३, २०७७
चित्रेको नागबेली सडकको ड्रोन तस्बिर [फोटो फिचर] ओखलढुंगा । आज विहान मौसम केही खुलेको थियो । तर सिद्धिचरण नगरपालिकाको चित्रे गाउँ पुग्ने मौका दिउँसो मात्रै जुर्‍यो । जतिबेला पानी झर्नै लागेको थियो । कुहिरोले डाँडाकाँडा ढाक्दै थियो । बिहिवार, बैशाख २५, २०७७
धनेपुबाट जे देखियो [फोटोफिचर] ओखलढुंगा । आज विहानैदेखि दिन धुम्म थियो । वरपर बादल लागिरहेको थियो । मौसमले जति चुनौती दिइरहेको थियो त्यति नै ममा फोटो खिच्ने भोक पनि थियो । आइतवार, बैशाख १४, २०७७
ओखलढुंगाबाट देखिएको मनै लोभ्याउने सूर्योदय नारायण गोपालको स्वरमा रहेको एउटा गीत छ 'पोखिएर घामको झुल्को भरी संघारमा...।' यो गीतले भनेझैँ शनिबार विहान म सिद्धिचरण नगरपालिका ११ को वितलप पुग्दा घामको झुल्को भर्खर गाउँभरि पोखिएको देखियो । सूर्योदय र सूर्यास्तको उत्कृष्ट दृष्य देखिने यो ठाउँमा म घाम उदाउँदै गरेको तस्बिर खिच्नका लागि पुगेको थिएँ । मैले दर्जनौँ तस्बिर लिएँ । मैले लिएका तस्बिरमध्ये केही तस्बिर यहाँ प्रस्तुत गरेको छु । शनिवार, चैत्र २९, २०७६
रानीवनमा बन्यो आकर्षक कमल पोखरी शनिवार, फाल्गुन २४, २०७६